2 drawer,2door kitchen cabinet
> Household wear>2 drawer,2door kitchen cabinet
Kitchen cabinet for gas stove Stainless top with2drawer and2door and 1 shelf. အပေါ်ဘက်စတီးပြားအခင်းဖြစ်ပြီး အံဆွဲ (၂)ခု၊ တံခါး (၂)ချပ်နှင့် စင်အပို (၁)ခု ထပ်ပါဝင်သေးတဲ့ ဂက်စ်မီးဖိုအတွက်ဗီရိုဖြစ်ပါသည်။
Kitchen cabinet for gas stove Stainless top with2drawer and2door and 1 shelf. အပေါ်ဘက်စတီးပြားအခင်းဖြစ်ပြီး အံဆွဲ (၂)ခု၊ တံခါး (၂)ချပ်နှင့် စင်အပို (၁)ခု ထပ်ပါဝင်သေးတဲ့ ဂက်စ်မီးဖိုအတွက်ဗီရိုဖြစ်ပါသည်။ Size: W100*D60*H75 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၀၀၊ အနံ ၆၀၊ အမြင့် ၇၅ စင်တီမီတာ